Tobin-javamaniry sarony maitso - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Ny dabam-pambolena an-jaridaina dia azo alaina amin'ny fananana rehetra atsinanan'i Sydney mankany Newcast M1 Pacific Motorway. Izany dia manamora kokoa ny fanodinana fako zaridaina any amin'ny morontsiraka afovoany. Ny fanodinkodinana ny zava-maniry an-jaridaina dia manana tombony tena izy ho an'ny tontolo iainana, ny tena miharihary dia ny toerana fanariam-pako voavonjy.
Natao ho an'ny zavamaniry an-jaridaina ihany ny tavoahanginao maitso. Angonina indroa isan-kerinandro io dabam-pako io amin'ny andro mitovy amin'ny dabam-pako mena mena, fa amin'ny herinandro mifandimby mankany amin'ny dabam-pako.
Ireto manaraka ireto dia azo apetraka ao amin'ny fitoeram-boasary maitso misy anao:
Ireto manaraka ireto dia azo apetraka ao amin'ny fitoeram-boasary maitso misy anao
Tapaka bozaka sy ravina
Hetezo, rantsankazo ary rantsana
Zavamaniry sy kirihitra kely
Zavatra tsy ekena ao amin'ny dabam-boankazo misy zavamaniry sarony maitsonao:
Zavatra tsy ekena ao amin'ny dabam-boankazo misy zavamaniry sarony maitso
Vato sy tany
Sampana lehibe, hazo ary fotony
Mety tsy ho voaangona ny entana diso ao anatin'ny dabam-boankazo ao an-jaridainao.
Torohevitra momba ny fambolena zaridaina
Tsy misy harona plastika: Alefaso moramora ao anatin'ny daba ny entanao. Tsy hanokatra harona plastika ny mpiasa ao amin'ny trano fanaovana compost, ka izay rehetra ao anaty harona plastika dia hiafara any amin'ny fanariam-pako.
Zona fanaovana compost: Tapahina amin'ny halavany ny rantsana sy ny fanetezam-boaloboka ary ny rantsan-kazo, anisan'izany ny sampan-drofia, ka afaka mikatona ny sarom-bilany.
Inona no mitranga amin'ny zavamaniry ao an-jaridainao?
Isaky ny roa herinandro Cleanaway dia manary ny dabam-boankazo ao an-jaridainao ary manatitra ny akora ho any amin'ny toeram-pambolena ara-barotra. Betsaka ny vokatra vokarina ao amin'ireo trano ireo, anisan'izany ny mulches, zezika organika, tany amin'ny tany, fangaro amin'ny vilany ary akanjo ambony, izay amidy amin'ny indostrian'ny fambolena isan-karazany.